Dalalka Muslimiinta ah ee ka dhiidhiyay hadalkii Madaxweyne Emmanuel Macron |
Dalalka Muslimiinta ah ee ka dhiidhiyay hadalkii Madaxweyne Emmanuel Macron
Kumanaan Muslimiinta dunida ka mid ah ayaa dhigay dibadbaxyo looga soo horjeedo hadaladii madaxweynaha Faransiisku uu ku taageeray isla markaana uu ku tilmaamay xurriyatul qowl sawirro gacmeedyo loogu gafayo Nabi Muxamed NNKH .
Isu soo baxyadaan ka dhanka ah dowladda Faransiiska ayaa Jimchii ka dhacay dalalka Pakistaan, Bangladhesh, Lubnaan iyo wadamo kale.
Dibaxayaasha ayaa ku baaqayay in la diido wax soo saarka Faransiiska waxeyna cambaareyn dusha uga tureen madaxweyne Emmanuel Macron.
Wuxuu bartilmaameed u noqday tiro ka mid dalalka Mulsmiinta caalamka oo ka carooday hadallada ka soo yeeray.
Mr Macron ayaa ku sheegay diinta Islaamka diin dhibaato ay ka jirto waxaana uu difaacay xuquuqda uu wargeysku u leeyahay baahinta sawir gacmeedyadii lagu af-lagaadeynayay Nabi Muxamed Naxariis iyo Nabd galyo korkiisa ha ahaatee.
Xiisadda ayaa xoogeysatay kadib markii nin Muslim ah uu dilay macalin u dhashay dalka Faransiiska kadib markii uu tusiyay arday uu cashir siinayay sawir gacmeedyada lagu aflgaadeynayay Nabi Muxameed NNKH .
Mr Macron ayaa yiri ” Sababta Macalinka loo dilay waa in ay na yeeshaan islaamiyiintu mustqbalka “, balse Faransa isma dhiibi doonto”.
Muslimiinta ayaa hadalkaas Mr Macron’ u arkay in uu yahay hadal gaf ah maadama Nabi Muxamed Naxari Naxariis iyo Nabd galyo korkiisa ha ahaatee uu aktooda ka leeyahay qiimo iyo sharaf weyn.
Dibadbaxyada looga soo horjeedo Faransiiska ayaa ka socday guud ahaan dunida Muslimka maalmo.
Xiisadda ayaa sii laba kacleysay kadib markii Khamiistii weerar kale oo uu gaystay nin Muslim ah uu ka dhacay magaalada Nice ee dalka Faransiiska,waxaana weerarkaas lagu dilay sedax qof .
Paakistaan, booliska ayaa sunta dadka ka ilmaysiisa ku kala eryay kumanaan kun oo mudaharaadayaal ah oo hor tubnaa agagaarka safaaradda Faransiiska ee Islamabad. Goobjoogayaal ayaa sheegay in qaar ka mid ah dibadbaxayaasha ay isku dayeen in ay jiiraan booliska.Dibadbaxayaasha ku sugan magaalada Dhaka, ee caasimada Bangladesh, ayaa dab qabadsiiyay Sawirada Mr Macron waxayna siteen boorar ay ku muujinayeen in madaxweynaha Faransiiskau uu yahay nin Muslimiinta neceb.
Mid ka mid ah hoggaamiyaasha mudaaharaadka ee dalka Bangladhesh ayaa sheegay in Muslimiinta aysan ogolaan doonin in lagu qoslo waxa ay aaminsan yihiin: “Macno malahan hadii ay tahay Fransiiska, Marekanka iyo Ruuska ama awood kale oo weyn oo adduunka ka jirta , uma dulqaadan doonno qof kasta oo ku jees jeesa Nabigeena aan jeclnahay.
Dhinaca kale kumanaan dadkii ku tukanayay Masaajidak Barakeysan ee Al-Aqsaa ayaa shalay jimcihii kadib sameeyay isu soo bax waxaana ay cambaareyeen sawir gacmeedyada lagu beegsaday Nabi Muxamed Naxariis iyo Nabd galyo korkiisa ha ahaatee waxaana ay ku dhawaaqayeen erayo ay ku difaacayeen Sharafta Nabigeena Muxamed.